Laba Shaqsi Oo Magac Wayn Ku Leh Kubbada Cagta England Oo Eedayn Kula Kulmay Erayo Ay Wax Kaga Sheegeen Gabadhii Garsooraha U Ahayd Liverpool & Chelsea. - Gool24.Net
Laba Shaqsi Oo Magac Wayn Ku Leh Kubbada Cagta England Oo Eedayn Kula Kulmay Erayo Ay Wax Kaga Sheegeen Gabadhii Garsooraha U Ahayd Liverpool & Chelsea.
Jamaahiirta kubbada cagta aduunka ayaa si wayn ujeclaystay kooxdii garsoorayaasha ahayd ee ay hogaaminaysay Stephanie Frappart taas oo noqotay gabadhii ugu horaysay ee garsoore ka noqtay kulan final tartan kooxaha Yurub ah.
Stephanie Frappart ayaa si layaableh uga soo baxday shaqadii garsoorenimo ee uu xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA u igmaday inkasta oo markii la magacaabay ay dad badan qariib ku noqotay.
Laakiin 120 daqiiqo oo ay socotay ciyaartii finalkii UEFA Super Cup ee kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayay garsoore Stephanie Frappart iyo kooxdii ay hogaaminaysay waxay qabteen shaqo inta ugu badan kubbada cagta aduunku ay jeclaysteen.
Laakiin tababarihii hore ee xulka qaranka England ee Glenn Hoddle iyo Joe Cole oo xulka England iyo kooxo kala duwan oo Premier league ah ka soo ciyaaray ayaa eedayn badan kula kulmay erayo dumarnimo la xidhiidha oo ay ka sheegeen garsoorihii finalkii UEFA Super Cup.
Glenn Hoddle iyo Joe Cole ayaa istuudiyaha BT Sport ka falanqaynayay ciyaartii finalkii UEFA Super Cup ee kooxaha Liverpool iyo Chelsea waxaana hadalkoodii loo arkay mid ay ku quudsadeen ama ku yaseen gabadhii garsooraha u ahayd kulankan.
Glenn Hoddle oo 61 sano jir ah ayaa sheegay in gabadhii garsooraha ahayd ee Stephanie Frappart ay wax fiican samaysay si ay ragga kulankii finalka UEFA Super Cup ciyaarayay ay 120 daqiiqo ula oroday, waxaana lagu eedeeyay in uu dumarnimadeeda iyo awoodeeda quudhsaday.
Stephanie Frappart iyo haweenkii kale ee garsooranimada ka caawinayay ayaa u baahday in ay 120 daqiiqo ka shaqeeyaan kulan aad u xamaasad badnaa oo dhex maray Liverpool iyo Chelsea, laakiin Glenn Hoddle ayaa lagu eedeeyay in uu quudhsaday ama yasay awooda orod ee ay garsoorahani shaqadeeda ku qabsaday isaga oo laga dareemay in ay isaga layaab ku ahayd.
Joe Cole ayaa isna eedayn kula kulmay kadib markii uu sheegay in muuqaal caawiyaha garsoorka VAR aan mararka qaar la adeegsan wuxuuna ku dooday in la diidanaa in meesha laga saaro go’aanadii ay gabadha garsooraha ahi qaadatay isaga oo muujiyay in dumarnimadeeda lagu dhawrayay.
Arimaha ay ka hadleen Joe Cole iyo Glenn Hoddle ayaa loo arkay mid faquuq ama takoor ku ah dumarka gaar ahaan kuwa doonaya in ay garsoorayaal ka noqdaan kulamada waa wayn ee Yurub.
Falcelin ayaa baraha bulshada looga sameeyay hadalada Joe Cole iyo Glenn Hoddle iyada oo la difaacay garsoore Stephanie Frappart waxayna qaar ka mid ah jamaahiirta Premier league sheegeen in ay xataa ka fiicnayd garsoorka liita ee horyaalka Ingiriiska.